Sabuurradii 121 Ducada Loogu talagalay Difaaca iyo Caawinta Rabaa | QODOBADA LAGU SAMEEYO
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Sabuurradii 121 Ducada Loogu Talo Galay iyo Caawimaad
Sabuurradii 121 Ducada Loogu Talo Galay iyo Caawimaad
SABUURRADII 121: 1 Buurahaan indhahayga ku taagi doonaa, Caawimaaddaydu xaggee bay ka iman doontaa? 121: 2 Caawimaaddaydu waxay ka timaadaa Rabbiga sameeyey samada iyo dhulka. Isagu uma oggolaan doono in cagtaada la dhaqaajiyo, Kan ku dhawraa ma gam'i doono. SABUURRADII 121: 3 Bal eeg, kii reer binu Israa'iil dhawraa ma hurdoona mana hurdo doono. SABUURRADII 121: 4 Rabbigu waa ku dhawraa, Rabbigu waa hooskaaga midigtaada ah. 121: 5 Qorraxdu maalinta waxba kuma yeeli doonto. Habeenkana dayaxu waxba kuma yeeli doono. 121: 6 Rabbiga ayaa kaa dhawri doona shar kasta, Isagu wuxuu dhawri doonaa naftaada. 121: 7 Hadda intii ka bilaabata iyo tan iyo weligeedba Rabbigu wuxuu dhawri doonaa bixiddaada iyo soo geliddaadaba.
Maanta waxaan ku mashquulsanahay Sabuurka 121da salaadda ee ilaalinta iyo caawimaadda rabaani ah. Sabuurradii 121-aad waa mid ka mid ah sabuurrada ugu awoodda badan markay timaaddo ducada ilaalinta iyo ilaahnimadiisa I caawi. Markii aad naftaada ku hesho marinnada nolosha, waa inaad xusuusataa in caawimaaddaadu xagga Rabbiga ka timaado, waa inaad fahanto, inuusan ninna kuu siin karin xal joogto ah dhibaatooyinkaaga, keliya ayaa Ilaahay ku caawin kara. Sabuurradaan oo ah 121da salaadda waa duco ah ku tiirsanaan buuxda oo Ilaah. Marka ay caqabadaha nolosha horumarsan yihiin, markay cadaawayaashu isku dayayaan inay ku soo dejiyaan, waa inaad ku soo ducaysaa baryadaan ilaalin iyo caawimaad rabaani ah.
Maxay tahay sababta aan ugu duceyno badbaadin iyo caawimaad rabaani ah? Matayos 7: 8, waxay noo sheegaysaa in kuwa weydiiya ay nastaan. Si aad u aragto ilaalin rabaani ah iyo caawinaad noloshaada, waa inaad Ilaahay baryadiisa weydiistaa. Waa inaad jilbahaaga aaddaa oo aad dalbataa badbaadin iyo caawimaad. Ilmo kasta oo Ilaah ayaa ku hoos jira boqortooyada gudcurka. Shaydaanku ma doonayo inuu rumayste kasta ku guuleysto nolosha, haddii aad u oggolaatid Ibliis, wuxuu kugu weerari doonaa adiga iyo dhammaan howlaha gacmahaaga, sida uu isagu shaqada ugu sameeyay. Laakiin markii aad dabka ku gubato geedka salaadda, noloshaadu waxay ku kululaan doontaa sheydaan inuu soo dhowaado. Masiixi ahaan, haddii aad tahay inaad ku guuleysato, waa inaad ku jirtid weerarka xagga diinta ah. Waa inaad noqotaa Masiixiyiin xag-jir ah oo yaqaana sida looga hortago shaydaanka salaadda. Sidoo kale waa inaad u duceysaa inuu Eebbe kaa caawiyo safarka aad ku aadday masiirka.
Sidee buu Ilaahay u caawiyaa? Wuxuu adeegsadaa maraakiibta aadanaha, bini aadamkan ayaa loo yaqaan Caawiyayaal aayaha. Kuwani waa haween iyo rag uu Ilaahay kuu soo diro, si ay kaaga caawiyaan oo ay kuu caawiyaan marka aad buuxiso aayaha. Waa inaad Eebbe weydiisataa inuu kugu xidho iyaga heerkaaga isbeddelka Sabuuradaan oo ah 121da salaadda ee ah ilaalinta iyo caawimaadda rabbaaniga ah, waxay kuu gelin doonaan degsiimooyin aysan awoodaha jinnigu kuu dhowaan karin, waxay sidoo kale kuu horseedi doontaa kuwa kaa caawiya aayaha inay kuu helaan oo kuu duceeyaan hodan ah. Ruuxu wuxuu xakameeyaa jismiga, markaad kudarsato salaadahan sirta ah, waxaad arki doontaa ifafaale muuqda oo furan. Ku soo ducee salaaddan si caqiido ah maanta oo aad soo kabato mucjisadii aad sugaysay.
DAQIIQADII 121 AAD KAADHKA CADAWGA
1. Aabe waad ku mahadsantahay inaad tahay caawiyekeyga weligey jooga waqtiga baahi ee magaca Ciise
2. Aabe, waan kuugu mahadnaqayaa Weligaa ma seexatid oo hurdo kama weynaan doontid arrimaha noloshayda
3. Aabo, maxaa yeelay waxaad tahay gaashaankayga, kama baqi doono cadowga magaca Ciise
4. Waxaan cadeynayaa in magaca ilaahey si xoog leh ilaah ugu ilaaliyo magaca ciise
5. Waxaan maanta cadeynayaa in layga badbaadiyay weerar kasta oo xun oo ka dhaca maalinta magaca ciise
6. Waxaan cadeynayaa in la iga difaacayo weerar kasta oo sharraxa ah ee Habeennimo ee ku dhaca magaca Ciise
7. Aabo, waxaan cadeynayaa in naftaydu adigay kugu dhawrsan tahay, sidaa darteed cadaawayaashaydu iima dhaawici karaan magaca Ciise.
8. Waxaan u daayaa malaa'igaha Rabbiga inay igu xiraan kuwa ii caawiya mustaqbalkayga ee magaca Ciise
9. Weligay nolosha kuma xidhnaan doono magaca Ciise
10. Weligay caawimaad kuma ihi doono nolosha magaca Ciise
11. Awood kasta, oo ka wada shaqeysa barwaaqo, hoos ayey u dhacdaa oo ku dhintaa, magaca Ciise.
12. Awood kasta, oo doonaysa in ay igu diido mustaqbalkeyga, roon, magaca Ciise.
13 Waxaa qoran oo aniga xagayga, iyo magaca Ciise, oo wax alla wixii ku dhaca oo dhulka dhexdiisa waxaan u kala qaybin doonaa mid weyn.
14. Waxaan wax sii sheegaa inaan dhex istaagi doono taliyayaasha dunidan, magaca Ciise.
15. Ruuxa Quduuska ah, adigu waxaad tahay gargaarahayga ugu muhiimsan ee aayaha, waxaad igu xidhaa caawiyayaasha kale ee aan aayaha u nahay, magaca Ciise.
16. Awood kasta, taasi uma oggolaaneyso inaan ku gaaro awooddayda, roon, magaca Ciise.
17. Awoodda madax furashada, i hel magaca Ciise.
18. Sayidow Ilaahayow, igu ammaana ammaantayda, magaca Ciise.
19. Ruuxa Quduuska ah, xiro xoog kasta oo doonaya inuu iga diido ammaantaydayda, magaca Ciise.
20. Samadaow, ila dagaallama awoodaha ku fadhiya sharaftayda, magaca Ciise 21). Sayidow, maanta laga bilaabo, waxaan shaaca ka qaadayaa in naxariistaada aad ii sarreyn doonto ay xukumi doonto dhammaan xukummada shar ah ee magaca Ciise.
22). Sayidow, magacaagu waa munaarad xoog leh, oo kuwa xaqa ahu caawimaad bay ka helaan, anigu waxaan shaaca ka qaadayaa in maanta oo aadan gacan ka gaysan doonin magaca Ciise.23). Sayidow, i caawi in aan istaago dhexda tijaabooyinka iyo jirrabaaddaha magaca Ciise.
24). Oh Sayidow maanta indhahayga ayaan kuu saaray caawimaad, maanta waan ogahay inaanan weligey ceebayn doonin magaca ciise.
25). Maaddaama aan kor ka helay caawinaad, kuwa i xukumaa waa yaabi doonaan oo way arki doonaan sida Ilaahay u qurxiyo noloshayda magaca Ciise.
26). Oh Sayidow, way iska cadahay inaysan jirin cid caawisa. Sidaa darteed ayaan gacmahayga adiga kuugu fidinayaa caawimaad (sheeg magaca aad u baahan tahay caawimaad) xagga sare xagga magaca Ciise.
27). Oh Sayidow, sida aad u soo dirtay malaa'ig Michael si aad u caawiso Daanyeel waqtiga baahida, u soo dir malaa'igtaada si ay iigu caawiyaan magaca Ciise.
28). Sayidow, waxaan heystaa xasillooni maskaxeed, maxaa yeelay waxaad ii tahay gargaaraha magaca Ciise.29). Aabe Waxaan cadeynayaa in ninkani uusan ku faani doonin sida isha caawimaadda ee nolosheyda, waxaad tahay gargaarahayga kaliya ee magaca Ciise.
30). Sayidow, i caawi si aan ugu noolaado nolol cibaado leh markii aan kuu adeego.
article PreviousSabuurradii 35-aad Dhibcaha Salaadda ee Caddaalad Darrada
Next articleSabuurka 51aad Qodobbada Salaadda ee Nadiifinta iyo Saamaxa
Thandeka Siyoko Meey 26, 2020 saacaddu markay ahayd 6:44
Ilaah ha iga caawiyo sidii aan u soo diray malaa'ig Michael sida uu u yeelay Daanyeel
Oscar RODRIGOE Agoosto 15, 2020 XXX: 12 pm
Waan Ku Mahadnaqayaa Ciise Markasta. Fadlan Salaada Caafimaadkayga, Qoyskayga iyo Dhibaatooyinka Maaliyadeed ee ku jira Magaca Ciise Aamiin.
Lanetta Nofeembar 23, 2020 saacadu markay tahay 8:54
Cibaado aan igu xukumi karin xagga ruuxa ayaa qoyskeyga u ciqaabaya inay ii yimaadaan. Fadlan ka caawi inay u duceeyaan iyaga oo ka baxsan ilaalinta jirka.
Oluchi Umeh Mee 10, 2021 XXX: 12 pm
Ninna kuma faani doono inuu yahay caawiyaha noloshayda magaca Ciise. Allaha ku barakeeyo mudane
Ducada Ilaalinta Hoyga Iyo Qoyska
Idiinkama dayn doono inaad tagtid ilaaad Duco u Barakaynaysid ...
U ducee Qaranka Liberiya
20 Salaadda Ruuxiga ah ee Dagaallada Dhibaatooyinka Guurka